true integrity /zu-ZA/tools-for-life/integrity/steps/good-and-evil.html read 8 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/integrity_zu_ZA.jpg UbuQotho NokweThembeka
Kwi-Scientology, isizathu sangempela sitholakele sokusuka kungazelelwe futhi kungachazwanga emisebenzini, emindenini, nasezindaweni. Lokhu kusuka kubizwa ngokuthi ama-blow-offs.
Lokhu kungenye yezinto uMuntu acabanga ukuthi uyazi konke ngakho-ke akakaze azibheke. Kodwa-ke lokhu kwamnika inkathazo enkulu. Umuntu uzwe sengathi konke kuchaziwe, kepha izincazelo zakhe azange zinciphise inani lenkathazo eqhamuka nomuzwa wokuthi “ahambe.”
Isibonelo, uMuntu ubelokhu ephatheka kabi ngamanani aphezulu wedivosi, namanani aphezulu okweswela imisebenzi emafektrini nezinye izinto eziningi ezivela kungazelelwe noma kungachazwanga.
Sibona umuntu onomsebenzi omuhle, okungenzeka angawutholi ongcono, ngokuzumayo athathe isinqumo sokuhamba ahambe. Sibona unkosikazi, onomyeni nomndeni omuhle ngokuphelele, eshiya konke. Noma umyeni, enomfazi olunge ngokuphelele, ehlukana naye futhi ahambe ngaphandle kwesizathu esinengqondo.
Umuntu wazichaza ngokwakhe ngokuthi ziningi izinto ezimbi ezenziwa kuye futhi ngeke esakwazi ukubekezelela ukuhlupheka okunjalo, ngakho-ke kufanele ahambe. Kepha uma lokhu bekuyiqiniso, konke okwakufanele kwenziwe nguMuntu kuzoba ukwenza izimo zomsebenzi, imishado, imisebenzi, izinhlelo zokuqeqesha nokunye kube kuhle kakhulu futhi inkinga ingaxazululeka. Kodwa-ke, uma ubhekisisa izimo zokusebenza kanye nemishado kukhombisa ukuthi ukuphuculwa kwezimo kuvame ukukhuphula inani lama-blow-offs.
Ungaphatha abantu kahle kangangokuba bazijabhe ngokwabo (bazi ukuthi abakufanele), ngakho-ke bazizwa kufanele bahambe. Ngakolunye uhlangothi, ungaphatha abantu kabi kakhulu kangangokuba akukho okunye abangakwenza ngaphandle kokuhamba. Kodwa ukuphatha abantu kahle noma kabi kangangokuba baphoqelekile ukuthi bahambe akukaphenduli ukuthi kungani abantu abaningi kangaka beshiya umsebenzi noma umshado wabo. Isibonelo, umfazi wenza konke okusemandleni akhe ukwenza umshado bese umyeni azulazule ngokungazelele ayoba nomunye umfazi. Noma umphathi uzama ukugcina ibhizinisi lihamba kahle bese isisebenzi sihambe ngaphandle kokusho ukuthi kungani ehambile. Lokhu kuhamba okungachazwanga kubhubhisa izinhlangano kanye nezimpilo zabantu futhi sekuyisikhathi sokuthi sizizwisise.
ABANTU BASHIYA NGENXA YAMA-OVERTS ABO NAMA-WITHHOLDS.
Lokho iqiniso. Indoda enenhliziyo ehlanzekile—eyaziyo ukuthi yenze izinto eziqondile futhi ithembekile—ayikwazi ukulimala. Umuntu othi izinto ezimbi zenziwe kuye abese esuka emshadweni wakhe noma emsebenzini useyahamba uhamba ngenxa yama overts akhe nama-withholds akhe. Akukhathalekile ukuthi umuntu usuka emndenini, emshadweni, edolobheni noma emsebenzini. Imbangela iyafana ama-overts nama-withholds.
Cishe noma ngubani angaxazulula inkinga noma alungise indawo embi uma efuna ngempela. Kepha uma umuntu engasafuni ukukulungisa, kungama-overt acts akhe kanye nama-withholds okuye kwanciphisa amandla akhe okwenza okuthile ngakho, okwenza ukushiya kube sengathi iyona mpendulo. Ukwenza izaba zokumuka kwakhe, umuntu oshiya amaphupho izinto azenzele zona. Ukwenza ama-overts wakhe abonakale emancane, uzosho nezinto ezimbi ngalabo abalimazile.
Lapho umuntu esongela ukuthi uzoshiya idolobha, umshado, umsebenzi noma uhlelo lokuziqeqesha, okuwukuphela kwento enomusa okufanele akwenze ukudalula ama-overt acts akhe futhi nama-withholds. Ngaphandle kwalokho umuntu ugcina esehamba, ezwa ngamanga ukuthi ulinyaziwe, kepha empeleni uzizwa kabi ngaye nangezenzo zakhe.
Kuyamangaza ukuthi ama-overts amancane, angabalulekile azomenza kanjani umuntu ukuba ahambe ngokushesha.
Lapho umuntu ekholelwa ukuthi angeke azivimbe ekulimazeni umuntu omsizile, uzovikela lowo muntu ngokumuka. Lokhu yimbangela yangempela ye-blow-off. Ngakho-ke uma ungathuthukisa izimo zomsebenzi womuntu, uzokwenza ama-overts akhe ebukeke emabi kakhulu kuye, ngakho-ke kuzoba isiqiniseko ngokwengeziwe ukuthi uzoshiya.
Impendulo yale nkinga ukusebenzisa izinqubo ze-Scientology ukuhambisa umuntu ezingeni eliphezulu ngokwanele lapho angathatha khona umsebenzi awenze ngaphandle kwayo yonke imibono exakile yokuthi “Ngiye ngithi wenza izinto ngakho-ke ngiyahamba ukuze ngikuvikele kuzo zonke izinto ezimbi engizenza kuwe.”
Kunjalo futhi manje njengoba sesazi isisekelo sale nkinga, kukhona esingakwenza ngakho.